Dhacdo amakaag leh oo dhex martay lamaane Somaliyeed “Wiil laga dul qaaday xidigtiisa” | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	8:00 pm » Seddex askari oo Dowladda ka tirsan oo lagu dilay Magaalada Muqdisho iyo Dowladda oo ka hadashay 6:03 pm » Laba kamid ah baalooyinka qoraxda ku shaqeeya oo galabta la burburiyay 1:38 pm » Shan qof oo maanta lagu dilay Magaalada Kismaayo iyo dagaalo laga cabsi qabo inay ka qarxaan 11:23 am » Askari ka tirsan Ciidamada Dowladda oo xaaskiisii dilay, oo gacanta lagu soo dhigay 10:38 am » Mid kamid ah Saraakiisha ugu waaweyn Maamulka Axmed Madoobe, oo maanta dhaawac culus loogu geystay Magaalada Kismaayo 10:07 am » Daawo Sawirada: Shir seddex maalmood ka socon doono Magaalada Muqdisho, oo Dr. Saacid uu daah furay 9:05 am » Daawo Sawirada: Al Shabaab oo soo bandhigtay laba kamid ah Ciidamada Dowladda Soomaaliya 8:56 am » Al Shabaab oo dagaalo lagu jilbo murxay ku fashilisay weeraro lagu qaadi lahaa Magaalada Xudur 8:30 am » Qarax culus oo maanta Ciidamada Kenya lagula eegtay Magaalada Kismaayo 6:04 am » Garsoore Soomaali ah oo qaban doona Furitaanka tartanka By: Mastar // Apr 07 2012 at 2:34 pm // 3,337 Reads // Wararka Caalamka Dhacdo amakaag leh oo dhex martay lamaane Somaliyeed “Wiil laga dul qaaday xidigtiisa” Share Tweet
Qisadaan oo mid xanuun leh ah ayaa waxay dhex martay lamaane Soomaaliyeed oo lagu kala magacaabo Khaalid iyo Nimca, Khaalid ayaa ka sheekeeyay qisadaan oo aan hubo inaaad lafajici doontaan.
Waxaan ku dhashay degmada hawl-wadaag ee magaaladda Muqdisho, sanadka markuu ahaa 1980-kii. Waxaan kusoo bar-baaray magaaladda Muqdisho, waxbarashayda waxan kusoo qaatay Iskuulka Al Xikma oo ku yiilay xaafadda Taleex ee degmada Hodan.
Aniga iyo Nimco waxan aheyn isku Fasal, Ardayda waxay igu tilmaami jireyn inaan kamid ahaa dhalinyaradii Fasalka ugu aqyaarsaneyd. Sidoo kale Nimco waxay aheyd gabdhaha iska nabada jacel. Xaqiiqdii Nimco waan ka helay oo waxay aheyd gabar uu Alle u hibeeyey Qurux Masha’Allah. Waxaan aad u daneen jiray inaan la-hadlo ama aan fursad uun ku helo teleefanka laga helo.
Maalin maal-maha kamid ah ayaa xilligii iskuulka laga soo baxaayey lagaaray, balse waxaa maalintaas soo da’ay roob xoogan, meel maanan u dhaqaaqin oo waxaan isha uun ku haayey halka ay Nimco u dhaqaaqdo. Waxaan fursad ku helay Nimco oo kiligeed meel taagan, dhabtii waa ka cabsan jiray inaan lahadlo, anigoo diidanaa in’ay qalad i fahanto, waayo aad baan u daneen jiray.
Si kastaba ha’ahaatee waxaan u dhaqaaqay dhankii ay joogtay, waan lahadlay meesha ayaa isku wareysanahay, anigoon u sheegin magacayga ayay igu tiri, duqa magacaaga soo maaha Khaalid? Markaas baan ku iri haa, anigoo u raaciyey sidee ku ogaatay, waxay igu jawaabtay “haddii aad u moodo inaanan lagu garaneyn, hadaba iska ogow waa lagu yaqaanaa”, waxaa niyadda iska dhahay malaha qofta adiga ayayba ku dooneysaa.
Wada-hadal iyo isbarasho kadib waxaan kala qaadanahay teleefanadii guryaha inoogu jiray. Halkaasi ayuu ka bilowday xiriirkaynii, xilli aan dheerayn kadib, Nimco waxaan ku iri, wax badan ayaa ku daneyn jiray, adigoo aanan i fahmin wax dhibaato ah, sidee baad u aragtaa haddii aan ku sheegto arin aan in badan kaa qarin jiray, balse waxay igu tiri, waxba ha’iga xishoon hana iga cabsin ee afka kala qaad. Waxan u sheegay in’aan ahay wiil jacel. Waxay igu jawaabtay iga raali noqo, maxa yeelay waxaan la-socdaa wiil kale. Intaas kadib waan naxay, teleefankii ayaa ku damiyey waayo aad baan u naxay, xitaa waan garan waayey sida ay wax iga noqdeen. Todobaad maanan tagin iskuulka,
Sidoo kale Nimco waa ay i soo wici jirtay, balse caruurta ila dhalatay waxaan ka codsaday in lagu dhaho waa uu maqan yahay.
Iyadoo ay tahay galab jimco ah, misa-na aan ka fikiraayay Nimco, ayaa waxaa arkay wiil aanu saxib aheyn oo lagu magacaabo Cabdi Khadar iyo Nimco oo i soo socda, maanan dhaqaaqin markii aan arkay muuqaalka Nimco, waa naxsanahay oo wixii aan dhihi lahaa ayaa garan la’ahay. waa ay i soo gaarayn, waanu wada hadalnay, kadib Cabdi Khadar ayay u mahad celisay, sidii ayuu ku tagay, aniga iyo iyada ayaa isku soo harnay, waxay igu tiri “Nacas miyaa tahay, sidee wax kaa yihiin, gabar iyadoo oo ku dooneysa ayay waxay doonto ku dhaheysaa ee waxaa lagaa doonaayay inaad iga sal-gaarto oo maysan aheyn, inaad iska aamusto, hadda adigoo i maqlaaya welibana i arkaaya ayaa waxaa ku lee-yahay Khaalidow waan ku jeclahay Habeen iyo Maalin, kaamana maarmo habeenadaan oo dhan maanan seexaneynin, aad baan kaaga wal-walsanaa”. Intaas markaan maqlay aad baan u farxay, sidii ayuu ku bilowday caashaqeynii. Mudo kadib waxa inoo dhamaaday iskuulkii, waxaa anna Suuqa Bakaraha ka furtay Suuq Bacadla ah.
Sanadkii 2005-tii ayaa aqal galnay Aniga iyo Nimco, dhanka kale Nimco waxay aheyd Hablaha sida aadka u daneyn jiray wadamada reer Galbeedka.
Sanadkii 2007-dii horaantiisii ayay Nimco iga codsatay in’ay iska tahriibto, waayo xilligaas magaaladda Muqdisho waxay aheyd mid aanan lagu noolaan Karin, sidoo kale Nimco ayaa waxay iga dhaadhicisay haddii ay gasho Yurub in’ay dacwad i soo sameyn doonto. Anigana waan ka ogolaaday, sidii ayay ku Tahriibtay oo waxaan u gaday Layn Suuriya ah, sidii ayay Suuriya ku gashay, mudo kadib Turkiga ayay gaartay, halkaasi ayay kaga sii gudubtay wadanka Gareega (Greece), xilligaas Nimco waxay i laheyd Uur.
Wax walbo oo dhaqaalo aan lahaa, iyada ayaa ku tabar-rucay, sidii ayay ku gashay wadanka Finland.
Waxay i dhashay gabar, habeen habeenada kamid ah xilli aan kasoo baxay Salaadii cisha ahayd, ayay i soo wacday iyadoo igu tiri waa inaad imaadaa, Ethiopia, Kenya ama Uganda hadba midka aad dooneysid, waayo waxaan doonaayaa inaan ku dacwooda.
Laba todobaad kadib waxaan soo gaaray magaaladda madaxda dalka Kenya ee Nairobi.
Nimco waxay baratay wiil magaciisu yahay Najiib oo isna joogay dalka Finland, Nimco iyo Najiib xiriir ayaa ka dhaxeeyay balse Aniga maanan ogeyn, waxayna i bilowday Dacwad.
Intii ay joogtay Filand, Nimco iyo Najiib waa ay isku dheeraadeyn, waxaa i soo baxday Fiisihii aan ku tagi lahaa dalka Finland, sidii ayaan ku imid Finland, Airport-ka (Madaarka) maysan iga soo doonin oo waxay i soo dirtay wiilal ay qaraabo ahaayeen, halka ay iyadana magaaladda u raacday Najiib. Waxan isdhahay malaha shaqo ayay ku maqan tahay, oo shaqo kuma maqna ee wareeg ayay ku maqan tahay.
Nimco waxaan ku arkay isbadal wayn, waxaan arkay iyadoo i dhayesay duqa waa inaad ka adkaataa gabadhaada yar, aniga waan ku dhalay, waana ku keenay Finland, hadaba waa inaad u dhaqantaa sida reer Magaal oo kale. Waxay igu noqotay Yaabka Yaabkiisa.
Maalintii igu daneyd waxay aheyd, anigoo guriga jooga ayaa waxay keentay Najiib, qolka ayay galeyn, waan ciishooday, wax aan sameeyo ayaa garan waayay, go’aan cad waxaan ku gaaray inaan iskaga tago gurigaas, waxaa jiray wiil uu dhalay adeerkey oo ku noolaa meel gobol ah, meeshaas ayaan tagay, waxaana u sheegay sidii ay wax u dhaceyn. Wuxuu igu yiri waxaan maqlay qoftaas warkayda, oo intii aadan wadanka imaan ayaa waxay dhahday “Khaalid waan iska furaayaa oo waxaan guursanaayaa Najiib, Aniga Khaalid Jaceyl kuma guursan”. Intaas markii uu igu yiri ayaa sii-carooday
Go’aan cad ayaan qaaatay, oo muxuu yahay go’aankaaasi?, inaan iska furo raadsadana mid kale oo ka wanaagsan. Inta aanan furin iyada ayaan wacay kuna iri haddii aad i dooneyso waa kusoo dhaweynaayaa oo kuuguma daysanaayo, balse haddii aadan i dooneyn i sheeg.
Waxay igu jawaabtay “waxaan u baanahay inaad iskakey fasaxdo oo aan kaa raaxeysto”
Waan carooday teleefanka ayaa ku damiyey, sidii ayaana ku furay, haddii aan dilli lahaa Aakhiro iyo Adduun waxba kuma dheefeen, waxaan iska qaatay inaan iska sabro.
Khaalid oo ay ka muuqato tiiraanyo laga argagaxo ayaa intaasi kusoo koobay Qisadaan murugada leh ee ku dhacday.